''နာမည်အကြီးဆုံး Mobile Brand တို့ရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး Handset Model များကို အပတ်စဉ်ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး'' - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
''နာမည်အကြီးဆုံး Mobile Brand တို့ရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး Handset Model များကို အပတ်စဉ်ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး''
“နာမည်အကြီးဆုံး Mobile Brand တို့ရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး Handset Model များကို အပတ်စဉ် ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး”
iPhone7(128GB) Red Edition အပါဝင် တခြား နာမည်အကြီးဆုံး Brand တွေရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး Handset Model တွေကို အပတ်စဉ် ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး….
လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ရဲ့ အထူးကံစမ်းပွဲကြီး ပြန်လည် ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။
ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ခွဲများမှာ Handset နှင့် Tablet လာရောက်ဝယ်ယူသူတိုင်းကို iPhone7(128GB) Red Edition အပါဝင် တခြားနာမည်ကြီး Brand တွေရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး ဟန်းဆက်မော်ဒယ်တွေကို အပတ်စဉ် ကံစမ်းပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပတ်စဉ် ကံထူးနိုင်မယ့် ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကတော့...
• ကျပ်ငွေ (၁၀)သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ iPhone7(128)GB Red Edition (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၁၀)သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Samsung Galaxy S8 Plus (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၈)သိန်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Sony Xperia XZs (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၇)သိန်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Huawei P10 (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၆)သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Xiaomi Mi6 (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၅)သိန်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ One Plus 3T (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၅)သိန်းခွဲကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Oppo F3 Plus (၁)ဆု
• ကျပ်ငွေ (၅)သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ Vivo V5 Plus (၁)ဆု
အပတ်စဉ်တိုင်း အထက်ဖော်ပြပါ နာမည်ကြီး ဈေးနှုန်းကြီး ဟန်းဆက်မော်ဒယ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
# နီးစပ်ရာလူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ခွဲများမှာ နှစ်သက်ရာ ဟန်းဆက် (သို့) တက်ဘလက် ဝယ်ယူပြီး ကံစမ်းကူပွန်ရယူပါ။ ကံစမ်းကူပွန်ပါ အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး သတ်မှတ်ထားသော ကံစမ်းမဲပုံးထဲသို့ ထည့်ပါ။
# ကျပ်ငွေ (ဝကျပ် မှ ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်) အတွင်း ဝယ်ယူသူတိုင်း ကံစမ်းကူပွန် (၁) စောင်၊ ကျပ်ငွေ (၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၂၀၀,၀၀၀ကျပ်) အတွင်း ဝယ်ယူပါက ကံစမ်းကူပွန် (၂)စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကျပ် (၅၁၀,၀၀၀) ကျပ်တန်ဖိုးရှိ ဟန်းဆက်နှင့် တက်ဘလက် ဝယ်ယူသူအနေနဲ့ ကံစမ်းကူပွန် (၆)စောင် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ခွဲများမှာ လက်ငင်းငွေချေ၍သော်လည်းကောင်း အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း အဆိုပါ ကံစမ်းမဲအစီစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
# ပထမမြောက်အပတ်ရဲ့ ကံစမ်းကူပွန်များကိုတော့ ဒုတိယမြောက်အပတ်ရဲ့ ပထမမြောက်နေ့မှာ မဲနှိုက်ရွေးချယ် ကံစမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်အပတ်ရဲ့ ကံစမ်းကူပွန်များကိုလည်း တတိယမြောက်အပတ်ရဲ့ ပထမမြောက်နေ့မှာ မဲနှိုက်ရွေးချယ် ကံစမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ခြင်းအား အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# ကံစမ်းမဲနှိုက်ခြင်းအစီစဉ်ကိုလည်း လူကြီးမင်း၏ Facebook Page တွင် Live လွှင့် တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# ကံထူးရှင်များ၏ ဓာတ်ပုံကိုတော့ Live လွှင့်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် Page ၏ Photo Album တွင်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# ကံထူးရှင်များအား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဆက်သွယ်၍မရဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ကံထူးရှင်ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းလာရောက်ထုတ်ယူသည့်နေ့မှသာ Page ၏ Photo Album တွင် ထည့်သွင်းဖောြ်ပပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# အပတ်စဉ်တိုင်း နာမည်အကြီးဆုံး ဈေးအကြီးဆုံး ဟန်းဆက်မော်ဒယ်များ ပိုင်ဆိုင်သူများကိုလည်း လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင် ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြကြေငြာပေးသွားအုံးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
# ယခု ကျင်းပပြုလုပ်သော လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်၏ အထူးကံစမ်းမဲ အစီစဉ်တွင် လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင် ဝန်ထမ်းများ ပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ခွင့် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
# ကံစမ်းကူပွန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါက လူကြီးမင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသာ အတည်ဖြစ်ပါကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အထူးကံစမ်းပွဲကြီး ကျင်းပလျက်ရှိသော လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ခွဲလိပ်စာများနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များကတော့…
(၁) လူကြီးမင်း - လသာ (၂) လူကြီးမင်း - ပါရမီ (၃) လူကြီးမင်း - သမိုင်း
(၄) လူကြီးမင်း - ဇဝန (၅) လူကြီးမင်း - မြောက်ဥက္ကလာ
(၆) လူကြီးမင်း - ဖော့ကန်-အင်းစိန်
(၇) လူကြီးမင်း - ပေါက်တောဝ-အင်းစိန်
(၈) လူကြီးမင်း - နေပြည်တော်-သပြေကုန်း
(၉) လူကြီးမင်း - နေပြည်တော်-တပ်ကုန်း-Mini
(၁၀) လူကြီးမင်း - တောင်ကြီး (၁၁) လူကြီးမင်း - မကွေး
(၁၂) လူကြီးမင်း - ပုသိမ် (၁၃) လူကြီးမင်း - မော်လမြိုင် တို့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
More in this category: « “တတိယမြောက် RAM 8 GB နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ့် စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်သစ်” MPT ရဲ့ 4G LTE စနစ်ကို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ....? »